Nyaya DzeBonde - Saizi Yechombo Chemurume Ine Inebasa Here Pabonde? (Part 2) Nyaya DzeBonde - Saizi Yechombo Chemurume Ine Inebasa Here Pabonde? (Part 2)
Nyaya DzeBonde - Saizi Yechombo Chemurume Ine Inebasa Here Pabonde? (Part 2)
Ukahwa mukadzi achingotaura nezvesaizi yemurume ari kuda kutaura kuti murume wake haatori nguva yakakwana pakuita kwavo. Saizi chaiyo ine basa kuvarume kupfuura kuvakadzi.
Isu tongoda murume anechombo chinomira, oita chido chokurhojana nomukadzi wake nguva yakareba (10 minutes or more from insertion to ejaculation) vachikoirana, oitazve rudo pamukadzi wake. Zvokuti isaizi ani izvo hazvina basa rakawanda asi kungoti kana waona musi warinenge rakanyatsotsamwa ukafunga kuti ndini ndaritsamwisa kudai uye kuti rikapinda rese rinondiuraya iro rozopinda rokunakira pane kukuuraya unonakigwa, kwete nesaizi asi ne psychology yako wega.
Zivazve kuti kana chombo chamira, kukora kwacho kunonakira mukadzi kupfuura kureba kwacho zvichibva nokuti mukadzi akazvisimbisa masuru yechitubu here. Kana asina, zvinonetsa kuti akwanise kushinya chombo zvikuru kana akambozvara mwana.
Murume ane rino zibango asi achiita maminitsi mana kana mashanu handifungi kuti angambonaka seanediki asi achiita maminitsi gumi achiita. Hazvigoni. Kugona kushandisa chombo kuri pamberimberi pane kuti chombo chacho chakadii. Asi hazvirevi kuti kana munhu akazoitawo kadikidiki hazvina basa. Mukadzi ngaaone chombo se CHALLENGE. Saka saizi iri NORMAL sokuti kubva pa 12cm zvichikwira ndingati ndiyo yakanaka. Ukaverenga ma gwaro emasaizi unoona kuti vashomashoma vane saizi iri pasi pe 12cm.
Kozotizve mukadzi anogona kunyatsotambisa masuru yemukati mechitubu chake murume arimo anokwanisa kunakigwa nokunakira murume kupfuura mukadzi anongoti kwindi se kuti haapo murume achishanda ega. Rhoji ndeyenyu mese. ukatambisa chiuno nokutambisa masuru yako unobaiwa nokukwiziwa pakasiyana siyana mukati imomo wohwa panonyanyonaka wosimudzira chiuno kuti pawedzegwe ipapo. Murumewo akaona akuitisa manyawi nazvo anoitawo manyawi owedzera.
Saizi ndiyo hayo asi chikuru kuratidza kuti unoda zvauri kuita uye murume kunonoka kupedza. Varume shuwa kukasirira vakadzi venyu hakutinakidzi zvachose. Kana ndakubvisira bhurugwa chindiratidzawo kuti ndaita zano rakanaka. Woitawo kana ten minutes urimo uchikoira nokukwiza mukati nechombo ndichihwawo kuti pano paita murume. Unotohwa mukadzi wako achikuudza kuti ari kuhwa azere mukati nechombo.
Handizvowo here. Handina kubva kumusha kwedu ndichivinga kuzopiwa maminitsi matatu kana mana. Hwisisai ipapo kwete kusweroshupikana nokuti chombo chikuru here kana kuti chidiki. Wakatopiwa pawakapiwa ipapo, chasara kushandisa saka chidzidzawo kuita basa rakanaka nezaizi yaunayo. Kusweroemura vamwe varume vane hombe hazvina kwazvinokusvitsa.
Zivazve kuti HQ yokunakigwa kwemukadzi iri pabhinzi. Murume akashamwaridzana nebhinzi anoita murume mukuru chose. Ukatarisa pakamera chombo pamurume ndipo pamwe chete pakamera bhinzi pamukadzi asi pabhinzi panonaka 5 times kupfuura kunakigwa kwenyu varume nechombo. Kana murume achiona kuti haagoni kuwanza nguva ari mukati memukadzi wake, ngaatange ashandisa rurimi pabhinzi yemukadzi, mukadzi wofanosvika pedo kana kutoita Orgasm, kana murume ozopinza chombo ongopedzisa mukadzi kana kungozvimiririra iye mukadzi atopedza. Hakuna chombo chinonaka muchitubu serurimi pabhinzi. Hakuna. Ukadzidziswa nomukdzi wako kuti anoda kuti ubatebate bhinzi sei anodada newe zvikuru kana wahwisisa ukazvigona.
Ndoramba ndichingoyeuchidza varume kuti varume vedu, yeukai kunonoka. Tora nguva uri mukati mechitubu. Koira kusvika mukadzi wako apfidza. Kukoigwa ndiko kunonaka. Urume hunongonakira kuziva kuti ndahupiwa asi kuhi ndarhojewa hunge ndakoigwa nguva yakareba. Yeukai ipapo. Kubva pakupinza kusvika pakudiridzira ita gumi remaminitsi kana kupfuura. Mukadzi wako anokupa rukudzo gwakawandisa.
Hakuna chombo chakakura zvokusakwana muchitubu chakanyorova. Ukatora murume akareba 2metres and chombo chikurukuru, akavata nomukadzi akareba 1.1 metres, kana akanyorova chombo chinokwana mukati chete pasina kugwadziwa.
Variko varume vane chombo chidikidiki asi vashoma.
Hakuna chitubu chidiki zvokuti chombo hachipindi kana pakanyorova.
Hakuna mushonga wekukudza chombo, chero ukaenda kunyika ipi zvayo.
Pedza hako mari yako uchitenga mishonga asi chombo chako hachiwedzeri kukura.
Imboonawo video iyi uone murume ane chombo chekuma 34 cm. Asizve kwahi kumira kwacho kunonetsa uye iye murume wacho ingochani futi, zvinoreva kuti akatoremara. Hazvingaiti kuti togoti ngochani vanhu vakati tasa.